Notoloran'ny Filoham-pirenena mari-boninahitra ireto mpanao fanatanjahantena sy mpanazatra azy ireo androany 12 aogositra 2019, teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha. Miisa 13 ireo Atleta nahazo medaly volamena mihoatra ny roa izay nosalorana ny mari-boninahitra “Chevalier de l’Ordre national”. Atleta 78 nahazo medaly volamena nahazo ny mari-boninahitra « Commandeur de l'Ordre de Mérite Sportif », 61 medaly volafotsy nahazo ny « Officier de l'ordre du mérite sportif », ary 63 medaly alimo nahazo ny « Chevalier de l'ordre du mérite sportif ».
« Mampirisika hatrany ny mpanao fanatanjahantena aho », hoy ny Filoham-pirenena ka « nampitomboina avo efatra heny ihany koa ny fandrisika an'ireo Atleta sy mpanazatra amin'ity taona ity ka mahatratra 305.750.000 Ariary ny totalin'izany ». Efa nampitomboina ihany koa ny teti-bolam-panjakana natokana ho an’ny fanatanjahantena mba hanatsarana ny fanomanan’ireo Atleta hiatrika fifaninanana na nasionaly izany na iraisam-pirenena.
lundi, 12 août 2019 19:12
FAV Polio: Telo andro hamongorana ny lefakozatra
Notanterahana androany 12 aogositra 2019 ny fanokafana ofisialy ny hetsika Fanamafisana ny Andron’ny Vaksiny ho famongorana ny lefakozatra na « polio », ho an’ny eto amin’ny Faritra Analamanga. Andiany faha-15 ny amin’ity, ka Distrika 55 ao anatin’ny faritra 10 marefo indrindra eto amin’ny Nosy no anatanterahana ny hetsika ny 12 ka hatramin’ny 14 aogositra 2019.
“Hifanome tànana isika hamongotra ny Polio”, izany no lohahevitra amin’izao hetsika Fanamafisana ny Andron’ny Vaksiny fanefitra ny poliomielita andiany faha-15 izao.
Nahazo ny sata « Madagasikara, firenena afaka amin’ny aretina polio » isika tamin’ny Jona 2018, noho ny ezaka natao manoloana ny famongorana ny polio. Na izany aza anefa, mitohy hatrany ny hetsika Fanamafisana ny Andron’ny Vaksiny miaro amin’ity aretina ity hampitomboana ny tahan’ny hery fiarovana efa ananan’ny zaza.
lundi, 12 août 2019 16:54
Tsaraitso – Betroka: Dahalo iray maty voatifitry ny tompon’omby, iray hafa naratra
Nitrangana fanafihan-dahalo tao an-tanan'i Besakoa, Fokontany Analasoa, Kaominina Tsaraitso, Disitrikan'i Betroka ny 08 aogositra 2019. Toerana somary atsinanana tsy lavitra ny tampon-tanànan'i Betroka izy ity, ary nahazo fandrahonana misesy ataon'ireo dahalo.
Niaro tena ny Fokonolona, ka notsenain'ny balan'ny tompon'omby teo amin’ny fony ilay dahalo voalohany namoha valan'omby ka maty tsy tra-drano. Nisy dahalo iray hafa ihany koa voatifitra saingy nentin’ireo efa-dahy namany nandositra.
lundi, 12 août 2019 16:36
Fadintseranana: Nivoaka ny andiany « FANEVA »
Notanterahina teny amin’ny CCI Ivato ny zoma 09 aogositra lasa teo ny lanonana namoahana tamin’ny fomba ofisialy ireo inspekteran’ny ladoany mandrafitra ny andiany « FANEVA », rehefa niofana nandritra ny 18 volana. Ray mpiahy ity andiany ity ny praiminisitra lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian.
lundi, 12 août 2019 16:24
Fanabeazam-pirenena: Tambinkarama tsy azon’ny FRAM, ny « vacation » tsy misy mangirana
Hotanterahina manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara afaka roa herinandro ny CEPE izay fanadinam-panjakana voalohany atrehin’ny mpianatra manaraka ny fandaharam-pianarana malagasy.
Betsaka ny fitarainana re amin’izao fotoana fa betsaka amin’ireo mpampianatra « subventionné » no tsy mbola nandray tambinkarama hatramin’izao, ary efa volana maromaro izay.
Hatramin’izao ihany koa, manjavozavo ny « vacation » an’ireo mpanadina fanadinana, ka anairan’izy ireo ny tompon’andraikitra isan’ambaratonga eo anivon’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, ny Fampianarana ara-Teknika sy arak'Asa, mba hampizotra tsara ny fanadinana, ka hampitony saina ireo mpianatra hiatrika fanadinana sy ny ray aman-drenin’izy ireo.
lundi, 12 août 2019 16:14
Ambatoboeny: Nankalaza ny fety be « Eid-al adha » ny mpino Silamo
« Eid-al adha », « La grande fête », « Fête du sacrifice ». Andro manandanja ho an’ny mpino Silamo io. Nitontona 11 aogositra izy tamin’ity taona 2019 ity. Nankalaza izany ny mpino Silamo teto Ambatoboeny, izay notanterahina teo amin’ny Kianja Gabriel Razafintsalama.
Taorian’ny vavaka dia nisy ny karnavaly, sorona, fifaninanana samihafa nataon'ireo mpianatry ny « madrassa » izay sekoly fandalinana Korany ary lalao baolina kitra. Fiaraha-mikorana sy fizarana loka ho an’ireo mpandresy no namarana ny fety.
lundi, 12 août 2019 16:05
Antsirabe: Tafidina 0°C ny maripana
Mangatsiaka ny andro aty afovoantany. Nidina ambanin’ny 10°C ny maripana ambany saika mandritra ity herinandro ity. Raha ny tao an-drenivohitr’i Vakinankaratra izao tamin’ity androany ity dia teo amin’ny 0°C ny maripana tamin’ny 6ora sy sasany maraina.
lundi, 12 août 2019 14:52
Lalamby FCE: Betsaka ireo zokiolona tsy mbola misitraka ny fisotroan-drononony
Mitaraina ireo mpiasa aman-taonany maro, nahavita be teo anivon’ny Lalamby FCE (Fianarantsoa Côte-Est) efa lasa nisotro ronono fa tsy mbola nisitraka ny fisotroan-dronono ny ankamaroan’izy ireo nanomboka ny taona 2012 ka hatram’izao. Misy no efa nindaosin’ny fahafatesana, tsy nisitraka akory io valin-kasasarany io.